Codsiyada ugu xiisaha badan ee lagu dhagaysto muusikada suuqa | Ragga Stylish
Music waa farshaxan kaa caawinaya arisdeji jirkaaga oo nolosha la jaanqaad, inaad awood u yeelato inaad ku guuleysato farxad iyo farxad.
Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigeynaa liiska codsiyada dhageysiga muusikada, inaad kala soo baxdo ama ka dhageysato muusikada moobilkaaga ama kiniinigaaga.
3 Raadiyaha Tuneln
4 Muusikada garaac
5 Muusikada +
6 Wadar Browser Bilaash ah
Waa a codsi bilaash ah oo lagu dhageysto muusikada oo bixisa nidaam is-dhexgal ah, taas oo aad ka arki karto liiska-saaxiibbadaada oo aad dhegeysan karto.
Xilligan, waxay ku jirtaa xilli ballaadhin. Waxaa laga heli karaa Mareykanka, Yurub iyo Latin America, loogu talagalay qalabka IOS iyo Android.
Codsigan ayaa kuu oggolaanaya, hal guji, ogow xogta heesta lagu jiro xilligan. Waxay ku habboon tahay markaad u baxdo xafladda oo aad jeceshahay muusikada meesha.
Cusboonaysiinta ugu dambaysa, way kuu oggolaaneysaa la wadaag heesta shabakadaha bulshada. Barnaamijkan waxaa loo heli karaa taleefannada android, IOS iyo Windows.
Asal ahaan, waxay ka kooban tahay madal idaacad online ah oo ku siisa kumanaan xarumood oo adduunka ah. Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa inaad dhageysato muusikada qalab kasta oo Android ah (2.3) oo aad duubitaan ku sameyso barnaamijkeeda.
Codsigani kaliya uma ogolaanayo inaad dhageysato muusikada, sidoo kale dhiso maktabad heesaha elektarooniga ah halkaas oo aad ka heli karto kumanaan heeso ah oo si sax ah loo dalbado. Xilligan la joogo waxay heysataa in ka badan 20 milyan oo heeso ku jira buuggeeda.
Es mid ka mid ah codsiyada ugu dhaqsaha badan xilligan. Waxay leedahay malaayiin heeso sireed oo aad kala soo bixi karto oo aad ku dhexgeli karto maktabadda taleefankaaga taleefanka. Isagu waa hadda diyaar u ah qalabka Ipad iyo Iphone.
Wadar Browser Bilaash ah
Waa codsi gaar ah oo loogu talagalay Iphone, xaddidna laguma soo dejisan karo qalabkan, taas oo aad u adag in la helo. Ka sokow in ay fududahay in la isticmaalo, kaliya waa inaad soo gashaa, guji heesta aad rabto oo raac tilmaamaha si aad u soo dejiso.
Ilaha sawirka: Hispasonic
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Codsiyada ugufiican ee dhageysiga muusikada
Gucci waxay qaadataa safar dib-u-habeyn ah ololaheeda cusub